सडक निर्माणमा चरम लापरवाहीः खर्च बढी, काम कम !
खर्चअनुसार काम नहुँदा जुम्लीबासी आक्रोशित, अधिकांश आयोजना अलपत्र
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश | जुम्लाको हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा निर्माणधीन सडकमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
गत आवको योजनामा बड्की ओदी कालिकोट सडक स्तर वृद्धिका लागि गाँउपालिकाले ८० लाख बजेट छुटाएको थियो ।
८० लाखमा बड्की ओदी हुँदै कालिकोटसम्मको झण्डै २० देखि २५ किलोमिटर सडक स्तरबृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, छुटाएको ८० लाख मध्ये ५८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
खर्च अनुसारको सडक निमार्ण नहुँदा स्थानीय आक्रोसित भएका छन् ।
आयोजना निर्माण तोकिएको समयसम्म पनि ५८ लाख ४८ हजार ९ सय ८ रुपियाँमा ५ किलो मिटर मात्रै सडक निर्माण भएको छ ।
उपभोक्ता समितका अध्यक्ष जुद्ध रोकायाले बजेट अनुसार सडक बढी खनिनु पर्ने बताए ।
यसमा आम नागरिकको सहभागितामा निर्माण गरिने भनिएता पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सक्रियता नदेखाउँदा डोजर प्रयोग गर्नुपर्ने भएका खर्च बढी आएको अध्यक्ष जुद्ध रोकायाको भनाई छ ।
‘यसमा कुनै स्वार्थ छैन, विल भरपाई सबै बुझान्छौँ’ अध्यक्ष रोकायाले भने ‘गाउँपालिकालाई चित्त नबुझेमा जस्तोसुकै कार्वाही भोग्न पनि तयार छौँ ।’ ‘अख्तियारमा पनि उजुरी गएको भन्ने सुनेको छु, यसमा कुनै तलमाथि गरेको छैन’, उनले भने ।
अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए सजाय भोग्ने उनको दाबी छ ।
बीचमै निर्माण कार्य रोकियो !
सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि बीचमै निर्माण कार्य रोकिएको छ । ८० लाख मध्य २१ लाख ५१ हजार रुपियाँ फ्रिज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रज बहादुर शाहीले बताए ।
उनले भने, ‘गाउँपालिकामा सकारात्मक सुझाब भन्दा आलोचनात्मक बढी आउने हुनाले सोचेअनुसारको काम गर्न सकिएन ।’
विभिन्न योजनामा भएको अनियमितता, फजुल खर्चको नियन्त्रण तथा उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्न निकै कठिन भएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
उनले गाउँपालिकाको विकासमा सहयोग गर्नुको साट्टो उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेको लापरवाहिले गाउँपालिका प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएको बताए ।
हिमा गाउँपालिकाका ६० बढी योजनामा उपभोक्ताको मनपरीकै कारण बजेट अनुसारको काम हुन सकेको छैन् ।
यसमा गाउँपालिकाको ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै हिमाकी उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले आगामी दिनमा निकै गम्भीर भएर अघि बढ्न आग्रह गरिन् ।
मनपरीले योजना अलपत्र
स्थानीय तहले दिएको विकासका निमार्णमा उपभोक्ता समितिको मनपरी बढ्न थालेपछि अपेक्षा अनुसारको विकास निमार्ण हुन सकेको छैन ।
उपभोक्ता समितिको मनपरीले गर्दा विकासे बजेटमा फजुल खर्च बढेपछि विकास निमार्ण अलपत्र परेका छन् । जुम्लाका स्थानीय तहका अधिंकाश विकासे योजना अलपत्र छन् ।
स्टमेट अनुसार सडक, भवन, घोरेटा बाटा, खानेपानी लगायत अन्य कुनै संचरना निमार्ण नभएको स्थानीयको व्यापक जनगुनासो छ ।
उपभोक्ता समिति बन्न हानथाप गरेर योजनालाई कमाई खाने भाडो बनाएको स्थानीय हंश शाहिले बताए ।
उनले भने, ‘हिमा गाउँपालिकाका अधिंकाश योजनामा उपभोक्ता समितिको मनपरी ले विकासे काम अलपत्र भएको छ ।’ ‘५८ लाख भुक्तानी गरेको सडक ५ किलोमिटर मात्रै निमार्ण हुनु दुखद पक्ष हो’, शाहीले भने ।
स्काभेटर लगाएर सडक खन्दा बजेट अपुग भएको बाहाना उपभोक्ता समितिले फजुल खर्च गरेको उनको भनाई छ ।
स्थानीयको सहमति बिनै स्काभेटर लगाएर पनि ५८ लाखमा ५ किलोमिटर मात्रै सडक निमार्ण हुनु शंकाको विषय बनेको अर्का स्थानीय कालि बहादुर रोकायाले बताए ।
उनले भने, ‘यो उदाहरण भएपनि दियार गाउँको खानेपानी आयोजनामा झण्डै ३ लाख बढी उपभोक्ता समितिले फजुल खर्च गरी निमार्ण अलपत्र पारकोे छ ।’
त्यस्तै, रंगशाला निमार्ण पनि स्थानीयको सहमति बिनै गर्दा अख्तियारमा मुद्दा परेको छ ।
विकास निमार्णका क्षेत्रमा अनियमितताले सिमा नाघेको रोकाया बताउँछन् ।
सार्वजानिक सुनुवाईकै बेला गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीका अगाडी प्रत्यक्ष ध्यानकर्षण गराइएको थियो ।
प्राविधिक खर्चका नाममा लाखौँ खर्च निकाल्ने, विकासे बजेटमा उपभोक्ताको रजाईको परम्परा अन्त्य नभए सम्म दिगो विकास सम्भव नरहेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले गरेको अनियमितताका कारण सिंगो गाउँपालिकाको ध्यानर्कषण भएको छ, ५८ लाखमा ५ किमि मात्रै सडक कसरी खनियो, स्टिमेट अनुसार काम किन भएन, भएको भए अख्तियारमा मुद्दा किन पर्यो लगायतका विषयमा प्राविधिक, तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट स्पष्टीकरण मागिनेछ ।
चित्त बुझ्दो नभए, कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाईने अध्यक्ष शाहीले प्रतिबद्धता गरे ।
उनले दिगो विकास र गाउँपालिकाको समृद्धीको लागि सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एकढिक्का भएर हिड्न सुझाब दिए ।
गाउँपालिकामा हुने अनियमिततालाई अन्त्यका लागि अभियान चलाउने उनको दाबी छ ।
हिमा गाउँपालिकाको सार्वजानिक सुनुवाईका अवसरमा त्यहाँका स्थानीयले यस्तै गुनासो गरेका थिए । अपेक्षा अनुसार संघियताले फल दिन नसकेको उनीहरुका गुनासो छ ।